घर / Aceris व्यवस्था SARL / विदेशी निवेश को संरक्षण: राज्य को एक Reaffirmation तिर?
Aceris व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता मा एक दिन-सम्मेलन र जुन मा आयोजित विदेशी निवेश को सुरक्षा सह-प्रायोजित 2, 2017 विद्यार्थी समाजमा द्वारा देखि4फ्रान्सेली विश्वविद्यालयहरु: को अन्तर्राष्ट्रिय कानून को वकील संघ (पेरिस 1 Panthéon-Sorbone), को मास्टर संघ2अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था (पेरिस2Panthéon-Assas), को अन्तर्राष्ट्रिय कानून विद्यार्थी Nanterre को पूर्व छात्र संघ (पेरिस ओएस्ट Nanterre ला रक्षा) र विज्ञान पो मध्यस्थता समाज (विज्ञान पो) पेरिस मा केन्द्र Panthéon मा.
प्रमुख कानुनी विद्वान र चिकित्सकहरु को चार प्यानल विदेशी निवेश को सुरक्षा गर्न महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू छलफल, कुन हदसम्म हाल सन्धि मस्यौदा र अभ्यास गर्न सोधपुछ राज्य को एक reaffirmation सुझाव.
पहिलो प्यानल को विषय को विदेशी लगानी ठोस सुरक्षा को तंत्र को विकास भएको थियो. पहिलो प्रस्तुति क्षमता र admissibility बीच भिन्नता संग व्यवहार गर्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयहरुमा र arbitral अधिकरणों बीच contrasting अभ्यासहरू underscoring. दोस्रो panellist को निष्पक्ष र equitable उपचार मानक छलफल, तथ्यलाई कि emphasizing, arbitrators को व्याख्या को स्वतन्त्रता अनुमति पछि, अमेरिका अहिले निष्पक्ष र equitable उपचार क्लाज को एक नयाँ शब्द मार्फत यसको स्कोप र प्रभाव circumscribe गर्छन. तेस्रो प्रस्तुति मा, यो expropriation क्लाज को प्रयोग महत्व प्राप्त देखिन्छ जोड थियो, जबकि यस्तो क्लाज को स्कोप अनिश्चित रहन्छ. अन्तमा, पछिल्लो panellist छलफल गैर-विवेक (सबैभन्दा इष्ट राष्ट्र र राष्ट्रिय उपचार क्लाज), गैर-विवेक को सिद्धान्त को एक्सप्रेस सीमाहरूको विशेष डाल.
अर्को प्यानल हाल नवाचारै विदेशी लगानी गर्न ठोस सुरक्षा विषयमा संग व्यवहार गर्नुभयो. पहिलो प्रस्तुति सुरक्षित लगानी र लगानीकर्ताले र कसरी राज्य को परिभाषा मा केन्द्रित थियो व्यवहार मा arbitral अधिकरणों विकास व्याख्याहरु नियन्त्रण गर्न हुन्थे छन्. दोस्रो panellist, उदाहरणको रूपमा CETA संग, treaties द्वारा प्रदान विश्लेषण एक्सप्रेस derogations र राज्य को विनियमित गर्ने अधिकार. तेस्रो panellist त्यसपछि द्विपक्षीय लगानी treaties मा मानव अधिकार र पर्यावरण व्यवस्था को खातामा क्रमिक लिनुभएको छलफल, व्यवहार शुरू र यस क्षेत्रमा नवाचारै छलफल. यो प्यानल निष्कर्षमा पुग्न गर्न, अन्तिम प्रस्तुति द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौताहरू अन्तर्गत नयाँ दायित्व मार्फत जिम्मेवार लगानीकर्ताले बनाउन थियो.
तेस्रो प्यानल को विषय काल्पनिक विकल्प थियो र विदेशी लगानी को सुरक्षा को लागि मध्यस्थता गर्न complements. पहिलो panellist पूर्व विचार सुरु, लगानीको विषयमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयहरुमा को वास्तविक र भविष्य परियोजनाहरू. दोस्रो प्रस्तुति लगानी मध्यस्थता मा व्याख्या को केन्द्रीय प्रश्न व्यवहार गर्नुभयो, अघि वा treaties को निष्कर्षमा पछि निर्धारण गर्न सकिँदैन भन्ने प्रश्न. तेस्रो panellist राष्ट्रिय कोर्ट अघि जाँदै को मौका छलफल, र आणविक विशाल बीच मामला विशेष Vattenfall र अगाडि जर्मन राज्य संघीय संवैधानिक अदालत. अन्तमा, लगानी मध्यस्थता लागि अपीलीय संयन्त्र र peculiar प्रणाली CETA मा enshrined सिर्जना गर्न पूर्व प्रयासहरू फिक्री अन्तिम प्रस्तुति जोड थियो.
अन्तिम प्यानल लगानी मध्यस्थता कार्यवाही मा अमेरिका को सक्रिय भूमिका संग व्यवहार गर्नुभयो. पहिलो panellist तेस्रो पक्ष कोष को मुद्दा बताउनुभयो, विभिन्न न्यायालयहरुमा र treaties यसको नियन्त्रण (सिंगापुर, हङकङ, CETA) र एक न्यायाधिकरण को शक्तिहरु तेस्रो पक्ष कोष द्वारा सामना गर्दा. दोस्रो panellist त्यसपछि तेस्रो पक्ष कोष को विपरीत पक्ष छलफल, कार्यहरू र आफ्नो वित्त राज्य वित्तीय अवरोध सहित. तेस्रो प्रस्तुति त्यसपछि खोल्न नयाँ बाटो छलफल Urbaser V. अर्जेन्टिना राज्य counterclaims सन्दर्भमा मामला, हुनत दावीकर्ताहरूबाट हुन अमेरिका लागि संभावना अस्वीकार गरियो. यो सम्मेलन निष्कर्षमा पुग्न गर्न, पछिल्लो panellist लगानी मध्यस्थता कार्यवाही मा पारदर्शिता को पदोन्नति र पछिल्लो माथि गरिएको छ कि ठूलो leaps बारेमा कुरा 10 यो कुरा मा वर्ष.
विदेशी लगानी सुरक्षा मा सम्मेलन को सारांश «मा पूर्ण प्रकाशित हुनेछ को मध्यस्थता नोटबुक » (संस्करण Lextenso).
चार्ल्स मौरिस Mazuy, Aceris व्यवस्था